Wadamo badan oo ka tirsan abid, Isbahaysiga Dalxiiska ee daneeyayaasha badan ayaa ah xiddiga cusub ee COP26 ee Glasgow
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Wararka Ururada » Wadamo badan oo ka tirsan abid, Isbahaysiga Dalxiiska ee daneeyayaasha badan ayaa ah xiddiga cusub ee COP26 ee Glasgow
Guddiga Dalxiiska Afrika • Airlines • Wararka Ururada • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Wararka Dowladda • Investments • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Daalacanayo Hadda • Wararka UK • Wtn
Ururka Dalxiiska Adduunka (UNWTO) weli laguma martiqaadin.
Waxqabad, ma aha ku dhawaaqiddu waa inay noqotaa dariiqa loo marayo dib-u-kicinta dalxiiska si wax ku ool ah, isbahaysigani wuxuu diyaar u yahay inuu iftiimiyo, iyo isbahaysi cusub oo awood leh.
COP 26 ee Glasgow ma aha oo kaliya helitaanka fariinta adduunka, in dalxiisku u baahan yahay inuu ka mid noqdo xalka isbeddelka cimilada, laakiin waa falkii ugu horreeyay ee Daneeyayaasha badan ee wadamo badan ka socda abid isbahaysiga dalxiiska .
Waxaa la joogaa waqtigii ficilka, ee ma aha dhawaaqyo.
Mustaqbal wanaagsan oo jawi saaxiibtinimo leh ee Dalxiiska Adduunka ayaa hadda noqday mid aad u ifaya.
Shirka Qaramada Midoobay ee Isbeddelka Cimilada ee 2021 ee xilligan ka socda Glasgow, UK waxa laga yaabaa inuu si fiican u noqdo bilawga nooc cusub oo iskaashi caalami ah oo lala yeelanayo ka qaybgalka qaybaha dadweynaha iyo kuwa gaarka loo leeyahay.
Ururka Dalxiiska Adduunka (UNWTO) ayaa dad badani u arkaan mid aan waxtar lahayn, oo aan la maalgalin, iyo maamul xumo ayaa laga yaabaa inay ku jirto baraaruga.
Waxay ku bilaabantay aragti uu lahaa Wasiirka Dalxiiska Sacuudiga, HE Axmed Caqiil Alkhateeb, iyo dhiggiisa Spain Mudane Reyes Maroto si ay ula wadaagaan aragtidan.
Ugu dambeyntii, dalalka iyo daneeyayaasha ayaa kor u kacaya iyadoo UNWTO ay hurdo la'aan hoggaan la'aan ah. Tani waxay tilmaan u tahay isbeddelka muddada dheer loo baahnaa ee socdaalka caalamiga ah iyo warshadaha dalxiiska, iyo laga yaabee fursad UNWTO cusub samaynayso.
Sacuudi Carabiya ayaa caan ku ah inay balaayiin ku maalgeliso horumarinta dalxiiska adduunka. Tani kaliya maaha mid soo jiidasho leh warshadaha, oo uu garaacay COVID-19 ku dhawaad ​​laba sano, laakiin way dhiirigelisaa oo dhiirigelisaa.
Iyadoo Ururka Dalxiiska Adduunka (UNWTO) uu saxiixo bayaan, isbaheysiga daneeyayaasha badan ee dalal badan oo ka kooban dalal badan ayaa ku saabsan waxqabad.
Looma baahna in la yiraahdo, maalgelintu waa dhab.
Madaxweynihii hore ee Mexico iyo gudoomiyaha dhaqaalaha cimilada cusub
Sucuudigu wuxuu muujiyay inuu yahay buundo isku xidha wadamada horumaray iyo kuwa soo koraya. Maanta saddexda wasiir ee dalxiiska ee ka kala socda Kenya, Jamaica, iyo Saudi Arabia oo ka qaybgalaya guddi ka socda Glasgow oo ku saabsan isbeddelka cimilada ayaa yidhi: Warshadaha Dalxiiska waxay rabaan inay qayb ka noqdaan xalka isbeddelka cimilada ee khatarta ah
Samaynta isbahaysigan cusub waa mashruuc 3 waji ah.
Munaasabadda maanta ayaa waxaa ka soo qeyb galay dowlado ka kala socday Mareykanka, UK, Kenya, Jamaica iyo Sacuudiga.
Wajiga 1, 10 wadan ayaa guud ahaan lagu casuumay isbaheysiga:
Ururada caalamiga ah ee maanta ka qayb galay:
Intaa waxaa dheer, Baanka Adduunka iyo Harvard ayaa lagu martiqaaday inay ku biiraan isbahaysiga.
ICC waxay u taagan tahay 45 milyan SME. 65% waxay ku nool yihiin wadamada soo koraya.
Markii la weydiiyay marka ururada yaryar sida Guddiga Dalxiiska Afrika iyo Shabakadda Dalxiiska Adduunka lagu casuumi doono inay ku soo biiraan, Gloria Guevara waxay tilmaantay in tan laga hadli karo tallaabada 2 ama 3.
UNWTO la og yahay weli laguma martiqaadin.
Wasiirka Dalxiiska ee Sucuudiga Axmed Alkhateeb
Snr Wacan wuxuu leeyahay,
Nofeembar 4, 2021 at 13: 04
Tani waa isla wejiyadii hore, oo hadda lagu taageerayo lacagta Sucuudiga, oo leh waxyaalihii hore oo isku mid ah. Waxay heleen fursad ay wax ku qabtaan, mana aysan yeelin! Gloria waxay madax ka ahayd WTTC waxayna mudnaan siisey koboca, koboca, koboca, iyadoo dhinac iska dhigtay deegaanka, intii ay xilka haysay. Aan u aragno tan waxa ay tahay - isku day quus ah oo loogu talagalay kuwa xoogga badan si ay u sii wadaan xajinta weligood dabacsan ee ajandaha, iyagoo daawanaya meeraha gubanaya natiijada sannadihii ay ku jireen waxqabad la'aanta.